CryptoNotes: mora foana ny mamorona na manafaka (Cydia) | Vaovao IPhone
CryptoNotes: mora foana ny manafina na manafaka (Cydia)
Ny iray amin'ireo zavatra izay mampanahy ahy indrindra momba ny iPad-ko dia ny filaminana ary ny tsiambaratelo momba ny rindranasao sy ny rafitra ary ny fitaovanao rehetra. Ny jailbreak dia iray amin'ireo fomba tsara indrindra ahazoana loharanom-baovao azo antoka ho an'ny takelaka misy antsika ary noho izany dia mahatonga ny iPad ho azo antoka kokoa noho izy io. Androany aho dia hanolotra ny CryptoNotes, tweak Cydia izay ahafahantsika manafina naoty amin'ny alàlan'ny fampiharana iOS Notes ao anaty rafitra encryption AES256. Raha te-hanafina ny naotinao ianao dia ity no tweak anao.
Encrypting Notes amin'ny AES256 Encryption miaraka amin'ny CryptoNotes
CryptoNotes dia iray amin'ireo tweaks tsara indrindra hitako tany Cydia ary koa tanteraka maimaim-poana. Any amin'ny repo ofisialin'i BigBoss ary tsy misy dokam-barotra na karazana fividianana ao anatiny, dia tweak maimaimpoana tanteraka izay omen'ny mpamorona azy, Firemoon777, ho antsika rehetra.
Ny fikirakirana CryptoNotes rehetra dia ao amin'ny Fikirakira iOS ary tsy afaka manova afa-tsy ny mampiavaka ny tweak roa isika:
Ampandehano ny CryptoNotes
Autosave: izany hoe raha isaky ny manoratra isika dia voatahiry, nefa tsy mila mivoaka ka voatahiry ao amin'ny app Notes.
Ny tweak dia miharo tsy mitambatra amin'ny fampiharana iOS Notes. Andao hojerentsika ny fomba fiasan'izy io:
Voalohany, mankany amin'ny app Notes izahay ary manoratra izay tianay hanafina, raha ny amiko: "iPad News". Eo an-tampon'ny naoty dia misy bokotra manao hoe: "Crypto." Tsindrio io ary safidio ny "Encrypt" (raha te-hanafina lahatsoratra iray isika) na "Decrypt" (raha te-hanafoana ny zavatra efa voahidy ao anaty valinteny AES256 isika).
Manaraka izany dia tsy maintsy mampiditra teny miafina izay tsy azontsika ovaina isika ary hampiasaina na hanafenana na hamoahana ny rojo misy amin'ny CryptoNotes.
Horaisintsika ilay encryption an'ilay naoty izay azonay alefa amin'ny namana rehetra hanafoanana azy. Ho fanampin'izay, raha mila filaminana bebe kokoa amin'ny hafatra isika, dia afaka manafina ny kaody voafina ary hahalala ny tena hafatra, dia mila manery hamoaka indroa isika.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Jailbreak » Cydia » CryptoNotes: mora foana ny manafina na manafaka (Cydia)
Samsung dia manafika an'i Apple indray amin'ny fanambarany ny Galaxy S5
Misy olana amin'ny FaceTime? Ny vahaolana dia ny fanavaozana ny rafitra fiasanao